China 4D HIFU Manufacturer sy Supplier | Hondee
CO2 FRACTIONAL Laser Fitsaboana milina
FRACTIONAL RF Golden Needle milina
Tongasoa eto HONDEE
Noho ny tsy manam-paharoa avo-angovo mifantoka fitarafana, ultrasonic mifantoka mivantana dia afaka tonga ny SMAS sosona, hampiroborobo ny fampiatoana ny SMAS fascia, ary mazava tsara miletsy ny hamaha ny olana sy ny fialam-boly ny tavany. Izany indrindra locates ny ultrasonic angovo amin'ny 4.5mm fascia sosona ambanin'ny hoditra.
Ny vokatra farany 4D vaovao maro-tsipika ultrasonic hatsaran-tarehy fitaovana tonga lafatra afaka hanatratra telo vokatry ny hoditra hanenjanany, fiketronana fanesorana, mamolavola body.The mandroso indrindra ampahany maro ny 4D-tsipika ultrasonic fitaovana hatsaran-tarehy dia ny fampiasana ny angovo ultrasonic mandroso indrindra, izay afaka miditra lalina ao an-SMAS sosona amin'ny hoditra, ka mahatonga avy hatrany Contraction ny collagen sy mandrisika collagen fibre Network, dia toy izany no mampitombo hoditra fihenjanan'ny resaoro avy amin'ny sosona ambany (ny tena fanamboarana rafitra no azo antoka kokoa) .This no azo antoka indrindra sy ny fomba mahomby indrindra hitsaboana endrika hoditra ary miletsy ny be taona ao amin'ny hatsaran-tarehy industry.It dia vanim-potoana maro cross-fitaovana hatsaran-tarehy tsy misy ratra, convalescence, mandeha ra. 4D multi-tsipika ultrasonic fitaovana hatsaran-tarehy, ny mahagaga sy ny fanatsarana ny fanesorana ketrona fahombiazan'ny no eken'ny manam-pahefana andrim-panjakana ny tany Etazonia, ary dia fantatra ho toy ny fahagagana ny tanora tanora!
1. fomba roa: fomba haingana na miadana fomba azo mifamadika.
2. Ny indrindra ny 11 tsipika azo ampiasaina amin'ny iray nitifitra, ary ny ambony indrindra dia 10mm faritra angovo ny sakany. ny mifanaraka masontsivana dia azo ahitsy araka ny haben'ny ny hoditra faritra, izay manao ny asa indrindra ny fotoana fohy, ho vokatry ny angovo teboka eo amin'ny hoditra kokoa fanamiana, ary ny vokany dia tsara kokoa mahasalama.
3. Amin'ny alalan'ny fampiasana indrindra-teknolojia avo mandroso ny teknolojia, dia fitaovana roa loha fitsaboana araka ny toe-tarehy hoditra, izay misy fiantraikany marina tsara samy hafa lalina tamin'ny hoditra, ary ny hery dia kely noho ny epiderme nandritra ny fitsaboana, ary 100% tsy misy fahasimbana .mandritra izany fotoana izany,
Mandritra izany fotoana izany, ny halalin 'ny hoditra tsaboina ny fitsaboana lohany dia mifanaraka amin'ny napetraka sarobidy, antoka ny hanala ny mpanjifa sy ny aina.
4. Ankoatra ny mafana vokany dermal collagen sy collagen fibre, dia mafana koa tairina ambonin'ny saborany sy ny fascia sosona sosona (SMAS), ary ny fitsaboana vokany dia tsara lavitra noho ny an'i Thermage.
5. Ny fandidiana Tsotra sy mora, tsy mila consumables, indrindra fitsaboana mampihena ny vola lany.
6. Ny vokatry ny hanenjanany sy mamolavola azo jerena avy hatrany aorian'ny fitsaboana, izay mety haharitra volana, fara fahakeliny, 18-24 amin'ny fotoana, ary hanatratra ratsy fivoarana ho an'ny hoditra taona indray mandeha isan-taona.
7. Makeup avy hatrany aorian'ny fitsaboana dia tsy hisy fiantraikany ara-dalàna ny fiainana sy ny asa.
Anaran'ny Instrument Parts
Nanamarika: Milaza koa ny manaraka ho an'ny vatana: 16mm, 13mm, 10mm, 8mm, 6mm, ny mifanaraka fangadiana azo voafantina hitsaboana vatana faritra araka ny filàna.
Ampidiro eto ny tahony-dalana, ho eo an-faladiany teo an-kavanan'ny ny milina sy nanamboatra ny screws,-tsipiriany ny hery tady ho any amin'ny hery ankavia faladiany sy mifandray amin'ny hery tsipika famatsian sahaza ho an'ny malefaka ao anatin'ny ara-dalàna isan-karazany miasa ny fitaovana. Ny fametrahana ny fangadiana no aseho eto ambany.
Interface Sava lalana
Jereo raha ny fifandraisana amin'ny fitaovana no ara-dalàna, jiro ny herin 'ny fitaovana sy ny tsindrio ny hery jiro' ny miaramila, dia ny milina, ka dia hanomboka ny baotin'i niseho sehatra. (Sary toy ny etsy ambany)
Rehefa avy manindry ny baotin'i interface tsara, dia avy hatrany miditra amin'ny asa matihanina interface tsara (sary toy ny etsy ambany).
2. Andraikitra fampidirana ny asa matihanina interface tsara.
▲ Ny ambony dia ilay soso-kevitra sarobidy ho an'ny tsirairay angovo ampahany tsirairay fangadiana ny fandidiana. (Raha toa ny vahiny dia afaka ihany koa ny bera Azo ahitsy araka izany, izany no mety ho ny vahiny tsy mahatsapa fanaintainana manindrona.)
Miasa fanilikilihana ara-potoana : Aza hairline, tempoly, maso (eyeballs), Yintang, orona, molotra ambony, saokany, lohatraoka, aorta, ary ny foitrany.
Dingana miasa ny fitaovana
1. Alohan'ny fampiasana ny fitaovana, nanisy fanafody sy namaoka ny fangadiana amin'ny toaka mba ho maina ny endrika rano.
2. Ampiharo ny vokatra gel (photosensitive gel) mitovy ny faritra ny hoentina.
3. Talohan'ny ny fiasan'ny ny fitaovana, hanoloana ny loha sy ny fitsaboana tsy maintsy manitsy ny hery avy any ambany ho any ambony ho an'ny isan-karazany fa ny experiencer mahatanty.
4. Nandritra ny fandidiana, ny fitsaboana dia tokony hotehirizina lohany fisaka hiady amin'ny hoditra ny aretina, ary ny hetsika tokony fandaharana Heba akaiky.
5. Eo am-panaovana ny asa, dia tokony hanontany tsy tapaka ny experiencer momba ny fampiononana sy ny fanitsiana ny angovo habe mba hahazoana antoka fa ny experiencer dia mandray ny zava-nitranga ao amin'ny tany mahafinaritra fanjakana.
6. miverimberina fitsaboana mafy amin'ny olana toerana (2-3 times).
Ny fametrahana sy ny fitsaboana Reference
sakany Clearance Power dity Length
Normal hoditra 8-10
3times / Mazava ho azy fa ny fitsaboana
1 fotoana / 2-3 volana 5 in-/ Mazava ho azy fa ny fitsaboana
Fepetra sy Maintenance
2. Ny plug amin'ny grounding Pin dia tsy maintsy ho ampiasaina eo anatrehan'i fampiasana, ary azo antoka fa ny herin 'ny fitaovana faladiany dia tena mafy orina.
Contraindication ny Instrument Users
1. Rehefa mampiasa ny fitaovana, azafady manadio azy amin'ny toaka famonoana mikraoba sy mitandrina izany araka ny tokony ho.
Technical masontsivana sy Package Size
Product name: 4D Muti-tsipika manohitra ny be taona Beauty Instrument
Fitsaboana lohany: 1.5,3.0,4.5,6.0,8.0,10,13,16 mety ho misafidy.
Fahan'ny malefaka: AC110V - 220V
Output matetika: 4-7MHz
Output malefaka: 10-200W
Size ny Air boaty: 20 × 40 × 54cm
Weight: momba ny 11kg (tsy ahitana ny fototra)
Previous: 4D 3IN1 HIFU + sary sokitra + fivaviana hanenjanany
Next: CO2 FRACTIONAL Laser Fitsaboana milina
4D 2IN1 HIFU + sary sokitra
4D 2IN1 HIFU + fivaviana hanenjanany
2 Floor, Building A, Shiguan Hondee Industrial Park, Tongsheng Community, Dalang Street, LongHua District, Shenzhen, Guangdong Province, PR Shina 518000
Liposonix Fa famolavolana-kevi-pitantanana , Derma Wand Hair Removal Machine Beauty Equipment , endrika Beauty Equipment , Hair Removal Device Home Use, mifantoka fitarafana , Anti-Aging Pdt,